प्रदेश २ मुख्यमन्त्रीको भविष्य जसपा केन्द्रको हातमा, प्रतिनिधीसभाको संसदिय दल निर्णायक बन्ने
जनकपुरधाम, भदौ ८ : वर्तमान प्रदेश–२ सरकारको भविष्य जसपाको केन्द्रिय नेताहरुको हातमा छ । जब सम्म प्रतिनिधीसभाको संसदियका नेता चयन हुदैन प्रदेश २ को वर्तमान सरकार यथावत रहने छ । राजपा र समाजवादी पार्टीको एकता पछि बनेको जसपाको प्रतिनिधीसभाको संसदिय दलको नेता छान्न वाँकी नै छ । त्यस पदमा तत्कालिन राजपाका नेता राजेन्द्र महतोको दावी छ र मौखिस सहमती समेत भइसकेको महतो पक्षको दावी समय समयमा वाहिर आउने गरेको छ ।
तर समाजवादी पार्टीका नेताहरु त्यसको खण्डन गर्छन । समाजवादीका नेताहरुका अनुसार संसदिय दलको नेता सर्वसम्मतीमा हुने सहमती भएको छ अरे । समाजवादी पार्टी उनकै अध्यक्ष र वर्तमान जसपाका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवनै संसदिय दलको नेता हुने तर्क गरिरहेका छन् । नभए यादवले पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईलाई संसदिय दलकै नेता बनाउन तत्काल वाहिर राखेको जसपा स्रोतको भनाई छ । महतो पक्ष भने प्रतिनिधीसभाको संसदिय दल आफुले पाउनेमा ढुक्क जस्तै छ ।
एक केन्द्रिय नेताकै अनुसार पनि एकताका वेला महतोलाई संसदिय दल दिनुपर्ने प्रस्ताव अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले नै गरेका थिए । यद्यपि उनले समाचारमा मेरो नाम कोड नगर्नुहोला पनि भने ।
प्रदेश २ मा केन्द्रको प्रभाव
महतो प्रतिनिधीसभाको संसदिय दलका नेता पाए प्रदेश २ मा तत्कालिन समाजवादीले नै संसदिय दल र मुख्यमन्त्री दुवै पाउने छन् । त्यसपछि वर्तमान सरकारनै पनि प्रदेश २ मा यथावत रहने सम्भावना रहन्छ । समाजवादीकै पोल्टामा प्रदेश २ को संसदिय दल र मुख्यमन्त्री गए लालबाबु राउतको सिट सुरक्षित रहने जानकारहरु बताउछन् । यद्यपि सो पदका लागि विजय कुमार यादव र रामअशिष यादवको समेत नाम चर्चामा रहेको छ । तर मुस्लिम मतलाई मध्ये नजर गर्दै उपेन्द्र यादवले भने लालबाबुको विकल्प खोजिहाल्ने सम्भावना नरहेको तर्क कतिपयको छ । त्यसो हुँदा संसदिय दल प्रदेश २ को उपनेता भने राजपाले पाउने छ जस्मा जितेन्द्र सोनल यथावत रहँदा वर्तमान सरकार सुरक्षित हुनेछन् ।
कुनै गुट भन्दा पनि एक स्वतन्त्र छवि बनाएका जसपाका प्रदेश सांसद रामअशिष यादवले भने, ‘सवैनेताहरुको त्याग र तपश्याको बाबजुद बनेको जसपा अव एक पार्टी भइसकेकाले समाजवादी र राजपा कोटा गर्नुहुदैन ।’ डा. भट्टराई र महतो जी तेस्रो चौथो वरियातामा जानुु जस्तो त्याग र तपस्याले बनेको पार्टीको केन्द्रिय र प्रदेशको संसदिय दल सर्वसम्मत हुनु पर्ने तर्क उनको छ ।
युवा नेता केशव झाको भने धारणा फरक छ, उनले केन्द्रको संसदिय दलको नेता नबने सम्म प्रदेशमा बन्दैन भन्नु उचित नहुने र कुनै कानुन पनि नरहको बताए । केन्द्रमा संसदिय दलका नेताको अहिलेनै कुनै हतार समेत नरहेको र नेता छनौटका लागि कुनै गृहकार्य पनि भइनरहेकाले प्रदेशमा असर नगर्ने बताए । प्रदेशका ५५ जना सांसद नेता छान्न स्वतन्त्र रहेको उनको कथन छ ।
जसपा केन्द्रीय स्रोतका अनुसार महन्थ ठाकुर संसदिय दलमा जाने पक्षमा छैनन । त्यसो हुँदा सकभर आफै नभए डा.बाबुरामलाई तान्ने प्रयास उपेन्द्रको रहने छ । महतो निकट स्रोतका अनुसार समेत सरतसिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादव र महेन्द्र राय यादव समेत महतोलाई रोक्ने प्रयास गर्नेछन् भने ठाकुर मौन बस्ने छन् । एकताका वेला ठाकुर र महतो भागबण्डा गरि धमाधम केन्द्रिय समितिमा आफना व्यक्तिहरु भर्ती गरेको असन्तुष्टी समेत रहेकाले उपेन्द्रकै नाममा सहमती बन्ने प्रवल सम्भावना रहेको स्रोतको दावी छ ।
र सो सम्भव भए तत्कालिन राजपाले प्रदेश २ मा संसदिय दल तथा मुख्यमन्त्री पाउने छ । राजपावाट सो पदका लागि जितेन्द्र सोनल, उपेन्द्र महतो र मनिष सुमन सहितको दावी रहदै आएको छ । राजपावाट यिनै तिनजनाको सम्भावना रहेको किनकी यादव समुदायवाट राजपाले सरोज कुमार यादवलाई सभामुख बनाइसकेको जानकारहरुको विश्लेषण छ ।